पुस्तक अंश : एेश्वर्यसँगै परीक्षा - साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
- चीजकुमार श्रेष्ठ, काठमाडौं
संस्कृतको किताबमा भएको एउटा कथा परीक्षामा नेपालीमा लेख्नुपर्ने थियो । ऐश्वर्यले त्यो कथा धेरैजसो बिर्सिएकी रहिछन् । उनले मलाई कथा भन्न भनिन् । मलाई त डर लाग्यो, कतै गार्डले समाउँछ कि ? मलाई परीक्षाबाटै निकाल्दिन्छ कि ?
भाद्र २६, २०७४-रानी ऐश्वर्यसँग एउटा संयोग पर्‍यो । त्यतिबेला उनको वीरेन्द्रसँग विवाह भएको थिएन । मैले स्नातक प्राइभेट पढेको हुँ । एकपटक स्नातकको जाँच दिन काठमाडौं आएको थिएँ । शान्ति विद्यागृह लैनचौरमा सेन्टर पर्‍यो । एउटा बेन्चमा दुईजना परीक्षार्थी हुन्थे । मेरो बेन्चको अर्को छेउमा एश्वर्य परिन् । मेरो विचारमा उनले पनि प्राइभेट नै दिएकी थिइन् ।